အ ရာ အား လုံး ဟာ.. ပျောက်.... ကွယ်... လွင့်... ပါး... ခဲ့... ပြီ... ပဲ........။
ပြန်လှည့်ကြည့်လို့ မမြင်နိုင်တော့ပေမယ့် ပြန်လှည့်မိတိုင်း သင်ယူမိနေတာက သင်္ခါရ သဘောတရား...။ ပြန်တမ်းတလို့ မရှိနိုင်တော့ပေမယ့် ပြန်မှန်းဆတိုင်း သိသိလာရတာက ကိုယ်တိုင်ရေး အမှားများ။ အတွေးနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ ကြယ်လေးတွေ အဝေးဆုံး မိုးကောင်းကင်မှာ...။ ငိုနေတာလား... ကြိုနေတာလား..။ ဘယ်သူတွေက လှမ်းလာနေပြီး ဘယ်သူတွေက တမ်းရှာနေမှာလဲ...။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအချိန်ဆို တစ်ယောက်တည်း စကားတွေ ပြောပြောနေတတ်ခဲ့တာ အလေ့အကျင့်တစ်ခုလို...။
Surely can't say anything. Surely can't hear everything.
Great Silent and who say me goodbye!
Life is short and yearning is long!